Sagittarius ee Zodiac qadiimiga ah - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Sagittarius waa kooxda afraad ee zodiac waana calaamada qaansoleyda fuula. Sagittarius macneheedu waa ‘ qaansoley’ oo Laatiinka ah. Horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa November 23 iyo December 21 waxaad tahay Sagittarius. Markaa akhrinta horoscope-ka casriga ah ee zodiac, waxaad raacdaa talada horoscope ee Sagittarius si aad u hesho jacayl, nasiib wacan, caafimaad iyo inaad aragti ka hesho shakhsiyaddaada.
Laakiin dadkii hore ma sidaas bay u akhriyeen bilowgiisii?
Kooxda Sagittarius asal ahaan
Sagittarius waa xiddigo xiddigo ah oo ka samaysan sawirka qaansoleyda ku rakiban, oo inta badan loo muujiyo sida centaur. Waa kuwan xiddigaha sameeyay Sagittarius. Ma ku arki kartaa wax u eg centaur, faras, ama qaansoley sawirkan xidigta ah?
Sawirka Xiddigaha Sagittarius
Xitaa haddii aan ku xirno xiddigaha ‘Sagittarius’ oo leh xariiqyo, weli way adag tahay in la ‘arko’ qaansolaha ku rakiban. Laakiin calaamadani waxay dib u noqotaa inta aan ognahay taariikhda aadanaha.
Sagittarius Constellation oo ku xiran khadadka
Halkan waxaa ah zodiac ee Macbadka Dendera ee Masar, in ka badan 2000 oo sano jir ah Sagittarius oo ku wareegsan casaan.
Sagittarius ee qadiimiga Dendera Zodiac ee Masar
Boodhka zodiac National Geographic wuxuu muujinayaa Sagittarius sida lagu arkay Hemisphere Koonfureed. Xataa isku xidhka xiddigaha Sagittarius ee leh xariiqyo, way adagtahay in ‘lagu arko’ fuushan, faras ama centaur ee kooxdan.
Sagittarius oo ku jira khariidadda Xiddigaha Qaranka ee Juquraafi
Sida xiddigihii hore, sawirka qaanso-qaaduhu maaha mid ku dhex jira xiddigta lafteeda. Hase yeeshe, fikradda qaansoleyda fuushan ayaa markii hore ka yimid, wax aan ahayn xiddigaha. Xiddiggii ugu horreeyay ayaa markaas fikraddan ku dul-saaray xiddigaha si ay u noqoto calaamad soo noqnoqonaysa. Hoos waxaa ku yaal sawirka caadiga ah ee Sagittarius, oo lagu sawiray kali ahaan. Waa marka aan aragno Sagittarius oo leh xiddigaha ku hareeraysan in aan barano macnaheeda.
Sawirka xiddigaha xiddigiska ee Sagittarius ee caadiga ah
Sheekada Zodiac ee Asalka ah
Zodiac-kii asalka ahaa kuma uusan hagin go’aamadaada maalinlaha ah ee ku aaddan nasiib wacan, caafimaad, jacayl iyo nasiib ku salaysan taariikhda dhalashadaada ee la xiriirta xiddigaha. Waxa uu ahaa qorshe Alle noo ballan qaaday in uu nagu hagayo Jidka Toosan. 12-ka xiddig ee Burji waxay qoreen qorshahan sidii xasuus muuqaal ah oo loogu talagalay dadka. Falaaga markii hore waxay ahayd daraasadda iyo aqoonta sheekadan xiddigaha.
Sheekadani waxay ku bilaabantay farcankii bikrada ee Virgo. Waxay ku sii socotay Libra, ina xasuusinaysa in dheeli tirnaanteena camalku aad u fudud yahay. Scorpio waxay muujisay halganka baaxadda leh ee u dhexeeya abuurkii Virgo iyo Scorpion – Shaydaan. Iyagu waa dagaal xaqqa xukunka.
Sagittarius ee sheekada Zodiac
Sagittarius wuxuu saadaaliyay sida halgankani u dhammaan doono. Waxaan fahamsanahay markaan aragno Sagittarius oo leh xiddigaha ku hareeraysan. Waa macnaha guud ee xiddigiska oo muujinaya macnaha Sagittarius.
Sagittarius ee Zodiac – Guuldaradii dhameystiran ee Scorpio
Falaadhka la sawiray ee Sagittarius ayaa si toos ah u tilmaamaya wadnaha Scorpio. Waxay si cad u tusinaysaa qaansoleyda ku rakiban burburinta cadawgiisa dhimanaya. Tani waxay ahayd macnaha Sagittarius ee Zodiac qadiimiga. Zodiac-ka Dendera (korka) iyo dhammaan Burjiyada halkaas oo xiddigaha laga arki karo midba midka kale ayaa sidoo kale muujinaya guusha qaansoleyda la dulsaaray ee Scorpio.
Sawir kale oo Zodiac ah ee Sagittarius. Falaadhkiisu waxa uu si toos ah ugu jeedaa Scorpion
Qaybta Sagittarius ee Sheekada Qoran
Guushii ugu dambaysay ee nebi Isa al Masih PBUH, oo ah farcankii bikrada, ee uu ka adkaaday cadowgiisa waxa lagu sii sheegay Kitaabka Quduuska ah inay u dhacdo sida lagu sawiray Sagittarius. Waa kan waxsii sheegidda qoran ee ku saabsan soo noqoshada Masih ee dhulka.
11 Oo bal eeg, waxaan arkay samadii oo furantay, iyo faras cad, oo kii fuushanaana waxaa la odhan jiray Aamin iyo Run; oo isagu xaqnimuu wax ku xukumaa oo uu ku diriraa. 12 Oo indhihiisuna waxay u ekaayeen ololka dabka, madaxiisana waxaa u saarnaa taajaj badan; oo waxaa ugu qornaa magac aanu ninna aqoon isaga mooyaane. 13 Oo isna wuxuu qabay dhar dhiig lagu rusheeyey, magiciisana waxaa la odhan jiray ereyga Ilaah. 14 Oo ciidammadii samada ku jirayna isagay soo raaceen iyagoo fuushan fardo cadcad oo qaba dhar wanaagsan oo cad oo daahir ah. 15 Oo afkiisana waxaa ka soo baxday seef af badan inuu ku laayo quruumaha; oo wuxuu iyaga ku xukumi doonaa ul bir ah, oo wuxuu ku tumay macsaraddii canabka oo xanaaqii cadhada Ilaaha Qaadirkaa. 16 Oo dharkiisa iyo bowdadiisana waxaa ugu qornaa magac, kaas oo ah BOQORKA BOQORRADA, IYO SAYIDKA SAYIDYADA.
17 Oo markaasaan arkay malaa’ig qorraxda dhex taagan; oo intay cod weyn ku dhawaaqday ayay waxay haadda samada dhex duusha oo dhan ku tidhi, Kaalaya oo u soo urura cashada weyn oo Ilaah, 18 aad idinku cunteene hilibka boqorrada, iyo hilibka kabtannada, iyo hilibka ragga xoogga badan, iyo hilibka fardaha iyo kuwa fuushan, iyo hilibka dadka oo dhan, xor iyo addoon, iyo yar iyo weynba.
19 Oo markaasaan arkay bahalkii iyo boqorradii dhulka iyo ciidammadoodii oo u soo wada ururay inay la diriraan kii faraska fuushanaa iyo ciidankiisii. 20 Markaasaa la qabtay bahalkii iyo nebigii beenta ahaa oo calaamooyinka hortiisa ku samayn jiray, kuwaasoo uu ku khiyaanayn jiray kuwii aqbalay sumaddii bahalka iyo kuwii u sujuuday sanamkiisii, oo labadoodii iyagoo nool ayaa waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka ahayd, oo baaruuddu ka ololaysay; 21 oo intoodii kalena waxaa lagu laayay kii faraska fuushanaa seeftiisii afkiisa ka soo baxday; oo haaddii oo dhammu waxay ka dhergeen hilibkoodii.
Muujintii 19: 11-21
Oo markaasaan arkay malaa’ig samada ka degaysa, oo waxay gacanta ku haysatay furihii yamayska iyo silsilad weyn. 2 Oo markaasay qabsatay masduulaagii ahaa maska duqa ah, kaasoo ah Ibliiska iyo Shayddaanka, oo intii kun sannadood ah ayay xidhay, 3 oo waxay ku ridday yamayskii, markaasay xidhay oo shaabad ku awday inaanu quruumaha mar dambe khiyaanayn ilamaa kunka sannadood ay dhammaadaan; oo taas ka dib waa in isaga la furo wakhti yar.
Muujintii 20: 1-3
7 Oo markii kunkii sannadood ay dhammaadaan ayaa Shayddaanka laga furi doonaa xabsigii lagu xabbisay, 8 oo wuxuu u soo bixi doonaa inuu khiyaaneeyo quruumaha deggan dhulka afartiisa gees, kuwaas oo ah Juuj iyo Maajuuj inuu iyaga u soo ururiyo dagaalka; oo tiradooduna waa sida ciidda badda. 9 Oo waxay ku soo kor baxeen ballaadhka dhulka, oo waxay hareereeyeen kaambadii quduusiinta iyo magaaladii la jeclaa; markaasaa waxaa samada ka soo degay dab, wuuna laastay iyagii. 10 Oo Ibliiskii iyaga khiyaanayn jirayna waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka iyo baaruudda ahayd, halkaas oo ay ku jiraan bahalkii iyo nebigii beenta ahaa, oo iyaga waxaa la cadaabi doonaa habeen iyo maalinba weligood iyo weligoodba.
Muujintii 20: 7-10
Unugga Xiddigaha ugu horreeya
Afartan calaamadood ee ugu horreeya ee Zodiac qadiimiga ah: Virgo, Libra, Scorpio iyo Sagittarius waxay sameeyaan unug xiddigiyayaal gudaha cutubka 12 ee Zodiac Story kaas oo diiradda saaraya taliyaha soo socda iyo kan ka soo horjeeda. Virgo wuxuu sii sheegay imaatinka farcanka bikradda. Libra wuxuu sii sheegay in qiimo loo baahan yahay camalkayaga aan ku filnayn. Scorpio wuxuu sii sheegay in qiimuhu noqon doono dhimasho. Laakiin Sagittarius wuxuu ku sii sheegay guushiisa ugu dambeysa ee fallaadha qaansoleyda oo si toos ah u tilmaamaysa wadnaha Scorpion.
Calaamadahani waxay ahaayeen kuwo loogu talagalay dadka oo dhan, ma aha oo kaliya kuwa dhashay bishii koox kasta. Sagittarius waa adiga xitaa haddii aadan dhalan inta u dhaxaysa Noofembar 23 iyo Diseembar 21. Waxaa la siiyay si aan u ogaano guusha kama dambaysta ah ee cadowga oo aan doorano daacadnimadayada si waafaqsan. Isa al Masih NNKH wuxuu buuxiyay Virgo, Libra iyo Scorpio imaatinkiisii ​​ugu horeeyay. Oofinta Sagittarius waxay sugaysaa imaatinka labaad. Laakiin tan iyo markii saddexda calaamadood ee ugu horreeya cutubkan la fuliyay, waxay bixisaa aasaas lagu kalsoonaan karo in calaamadda Sagittarius sidoo kale la fulin doono.
Akhriska Horoscope-kaaga Sagittarius ee Zodiac-kii hore
Horoscope Waxay ka timid Giriigga ‘Horo’ (saac) iyo qoraallada Nebigu waxay calaamadeeyaan saacadahan, oo ay ku jiraan Sagittarius ‘saacaddii’. Sagittarius ah horo akhrisku waa
Laakiin maalintaas iyo saacaddaas ninna waxba kama oga, malaa’igaha jannada iyo Wiilka toona, midna ma oga, Aabbahay keliya maahee,44,Sidaa darteed idinkuna diyaar ahaada, waayo, saacad aydnaan u malaynaynin ayaa Wiilka Aadanahu imanayaa.
Matayos 24: 36, 44
Nebigu waxa uu inoo sheegay in aanu qofna ogayn saacadda saxda ah ee Masih soo noqonayso iyo jabka cadawgiisa oo dhan, Allaah mooyee. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tilmaamo tilmaamaya u dhowaanshaha saacaddaas. Waxay leedahay waxay u badan tahay inaynaan filanayn ama aan diyaar u nahay.
Adiga iyo anigu waxaan codsan karnaa akhrinta horoscope Sagittarius maanta iyadoo la raacayo hagida soo socota.
Sagittarius wuxuu noo sheegay inaad la kulmi doonto carqalado badan ka hor saacada soo noqoshada Masih iyo jabinta buuxda ee Shaydaanka. Dhab ahaantii, haddii aanad maalin kasta ku beddelin dib u cusboonaysiinta maskaxdaada markaas waxaad la qabsan doontaa halbeegyada adduunkan -saacadaasina waxay kugu dhufan doontaa si lama filaan ah mana la socon doontid isaga marka la muujiyo. Haddii aadan rabin inaad hesho dhammaan cawaaqib xumada ka dhalan karta maqnaanshaha saacaddaas waxaad u baahan tahay inaad sameyso go’aan miyir qaba maalin kasta si aad ugu diyaargarowdo. Ka fiirso inaad si miyir la’aan ah ula socoto xanta iyo xanta dadka caanka ah iyo riwaayadaha saabuunta. Haddii ay taasi dhacdo waxay u badan tahay inay keento astaamo ay ka mid yihiin addoonsiga maskaxdaada, luminta xidhiidhada dhow hadda, iyo hubaal inay seegaan saacadda uu soo laabanayo oo ay weheliyaan inta badan dadka kale.
Shakhsinimadaadu waxay leedahay labadaba way ku fiican tahay iyo meelaha ay ku liidato, laakiin cadawga oo raba inaad mashquuliso, wuxuu kugu weeraraa astaamahaaga daciifka ah. Ha ahaato xanta aan shaqayn, sawir qaawan, hunguri weyni, ama wakhtigaaga oo kaliya ku luminaya baraha bulshada, wuu garanayaa duufsada aad ku dhici doonto. Markaa u duceeya gargaar iyo hanuun si aad ugu socotid jidka toosan iyo cidhiidhiga ah oo aad u diyaargarowdo saacaddaas. Raadso dhowrka kale ee aan iyaguna rabin inay seegaan saacaddaas, si wadajir ah ayaad isu caawin kartaan maalin kasta si aanay kuugu iman si lama filaan ah.
Iyada oo loo marayo Zodiac iyo qoto dheer oo galay Sagittarius
Afarta Calaamadaha Zodiac ee soo socda waxay sidoo kale sameeyaan unug xiddigiyayaal ah, oo muujinaya sida shaqada Kan imanaya uu inoo saameeyo, laga bilaabo Capricorn.
Ku bilow sheekada bilawgeeda Virgo.
Si aad u qoto dheer u gasho sheekada qoran ee Sagittarius:
Isa al Masih ayaa saadaaliyay soo laabashadiisa
Hogaamiyihii hore ayaa lagu arkay Xasad Yuusuf
Tags:ancient meaning of sagittariusmounted archer zodiacsagittarius and scorpiosagittarius zodiac